‘गरिबको यो दुनियाँमा कोही छैन’ - The Public Today
कोरोना कहर कोरोना भाइरस कोभिड-१९ जनचासो कोरोनाको कहर ब्रेकिङ्ग न्यूज कोरोनाको त्रास विचार
‘गरिबको यो दुनियाँमा कोही छैन’
by राजकरण महतो
६ चैत्र २०७६, बिहीबार ०८:२५
‘यो दुनियाँमा गरिबको लागि कहि कतै कोही छैन,’गौशालाकी ८५ बर्षीय चन्द्रकला राउत घरको दैलोमा विलौना गर्दै रोइरहेकी थिइन् । छातीमा हात राख्दैं भगवान् पुकारथिन् त घडि नेतालाई सरापथिन् । रुदारुदैं उनी छिनछिन्मा मुर्छित हुन्थिन् । चन्द्रकलाको आँखै अगाडि जेसिबी चलिरहेको थियो । बर्षैं लगाएर ठडियाइएको उनको घर भूमि व्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालयको निर्देशनले छिनभरमै भत्काइदियो । घर भत्काउन मन्त्री अर्यालय हेलिकप्टर चाटर गरेर आएकी थिइन् ।
गमर्कीको ४५ डिग्री तापक्रमा भनिन् उनले आगो बालेर चिया बेचेर घरको एकएक ईटा जोडिन् । माघ–पुसको कठियांग्रिदो जाडोमा प्लेट धोएर नास्ता बिक्री गरिन् ।आम्दानी र ऋण जम्मा गरेर उनले एक तल्ले घर ठडियाएकी थिइन् ।
४५ बर्ष नास्ता पसलको आम्दानीले बनाएको उनको घरमा सरकारले जेसिबी चलायो । आफ्नै आँखा सामुने ठडिएको घर छिनभरमै जेसिबीले ढाल्यो । त्यो देखेर उनी बेहोस् भएर भुँईमा ढलिन् । भत्केको घर हेरेर उनी जीवन भरको दुःख सम्झिदैं, भुँइमा ठाउको बजार्दै भन्दै थिइन्,‘ यहि बसेर जीवन बित्यो । अब कहाँ जाने ?’
उनी अनुत्तरीत प्रश्न गर्दै घरको दैलोमा रोइरहेको थिइन् । महिला प्रहरी आएर उनलाई काँधमा बोक्दैं साइड लगाइन् । त्यसपछि उनको घर कहिले नठडिने गरि भत्कियो ।घर भत्किएपछि पालमा उनको परिवार बसिरहेको छ ।
उमेरले डाँडा काटेको घाम जस्तै छिन्, ८५ बर्षीय चन्द्रकला राउत । अनुहारको छाला चाउरिएर मुज्जा परिसकेको छ ।
चौरीमा एक धुर न खेत छ, न त गाउँमा एक धुर घडेरी । चन्द्रकलाले चियानास्ता पसल गरेर तीन छोरा हुर्काए । भाडामा कोठा लिएर उनले जीवनको गाडी बढाउँदैं थिइन् । नौं दललले उनलाई बर्सौं पहिले महोत्तरीको गौशाला बजारको पश्चिम कुनामा बसाईं दिए । त्यसमा उनले घर बनाएर बस्दै थिइन् । उनको तीन÷तीन जना छोराबुहारी र ११ जना नाती÷नाती सहित त्यस घरमा बस्दैं आएकी थिएन् । उनी बसेको जग्गा सरकार स्वामित्वको निगौल गाई गौशालाको हो ।
महोत्तरीको गौशलास्थित निगौल गाई गौशालाको जग्गामा बनेका घर–टहरा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको नेतृत्वमा भत्काइएको छ । वर्षाैंदेखि बस्दै आएको ३० वटा घर टहरा भत्काएर १५ कट्ठा जमिन सरकारले खाली गराएको छ ।
बास खोसिएपछि गरिवहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । आइतबार दिनभरी चुलोमा आगो बलेको छैन । पीडितहरु भोक्कै थिए । घर बनाएकाहरु मध्य अधिकांसको आफ्नै निजी जग्गा पनि छ । घर भत्काइकाहरु मध्ये चार जना मात्रै सुकुम्बासी छन् ।
आँखा अगाडी नै आफ्नो घर भत्किएको र सामान असरल्ल भएको देखेपछि कतिपय बेहास् भएर ढलेका छन् । केटाकेटी वृद्धवृद्धा, युवा सबैजसो रोइरहेका छन् ।
मन्त्री अर्यालको अगुवाइमा घर–टहरा भत्काउन थालेपछि कोलाहलमचेको थियो । ऋण गरेर घर बनाएको र अब के गर्ने ? बस्ने कुनै विकल्प छैन कहाँ बस्ने भन्दै पीडितहरु रोइकराइ विलोना गरिरहेका थिए ।
चुनावका बेला भोट माग्न आउने तर अहिले आफूहरुको विजोग बनाउने र रमिता हेरेर बसेको भन्दै राजनीतिक दलका नेतामाथि आक्रोश पोखिरहेका थिए ।
यस बस्तीमा ४ वटा पक्की र अन्य कच्ची घर तथा टहराहरु थिए । शनिबार साँझ ५ बजेभित्रमा घरटहरा हटाउन गाई गौशालाले अन्तिम अल्टिमेटम लिएको थियो । सूचनालाई अटेर गरे कुनै पनि समयमासंरचना खालि गर्न यसअघि लिएको ३५ दिन समयवधि फाल्गुण १२ गते सकिसकेको थियो ।
मन्त्री अयार्यालले सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको बताइन् ।‘सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यस्थान गर्छ,’उनले भनिन्,‘ गुठ्ठीका जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरुमाथि सरकारको नजर छ । खालि गराउन तयारी भइरहेको छ ।’
वि.सं. १९८३ (इ.सं. १९२६) भारत विहार प्रान्तको दरभंगा महाराजाबाट १५ सय दूधालु गाई र २ सय विघा जग्गा प्रदान गरी निगौल गाई गौशालाको शुरुवात गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा नेपाल हिन्दु राज्य र गाई राष्ट्रिय जनावरको प्रतीक हुने धार्मिक दृष्टिकोणबाट बुढो, विरामी गाई, साढेहरु लगायत गौ वंशको संरक्षण गर्न गौशालाको अवधारणा विकास गरिएको थियो ।महोत्तरीको गौशालामा ‘निगौल गाई गौशाला’को नाम दिएर गाई संरक्षणको काम थालिएको थियो ।
शुरुको अवस्थामा गौशालाको व्यवस्थापन दरभंगा महाराजको तर्फबाट ब्रहमदेव ठाकुर मार्फत गरिएको थियो । नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दा व्यवस्थापनको जिम्मा तत्कालीन वडाहाकिमलाई दिइयो । पछि अञ्चलाधिश हुदै २०४७ पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएता पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो गौशालाको रुपमा परिचित गाई गौशाला बर्षै देखि अलपत्र तथा उपयोग विहिन अवस्था रह्यो । २०६७ जेष्ठ १९ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले यसको संचालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मार्फत गर्ने निर्णण भएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको गौशाला न.पा.मा अवस्थित श्री निगौल गाई गौशालाको जग्गा हाल करिब १५७ विघा रहेका निमित्त प्रमुख राधेश्याम खनालले जनाए ।
२ सय विघा जग्गा मध्ये १५७ विघाको लालपूर्जा छ । अरु केही जग्गा नापी हुन बाँकी छ । स्थानीयका अनुसार ५२ विघा जग्गा अझै हराइरहेको छ ।
हाल १ सय १७ विगा खेतीयोग्य जमिन, १० विघामा आँप तथा लिची बगैंचा, १० विघामा आधुनिक गाई गोठ क्षेत्र, ९ विघामा ३ वटा पोखरी, २ विघामा पुरानो गोठ, २ विघा १६ कठामा गौशाला नगरपालिकालाई कृषि तथा पशु हाट संचालनको लागी ठेक्कामा दिइएको र बाँकी जग्गा खोलाले कटानी गरी चरण क्षेत्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
घर भत्काउन मन्त्री आएपछि गाउँमा रुवाबासी
महोत्तरी : सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि बनाइएको घरमा चल्यो डोजर
महतो द पब्लिक टुडेका लागि सम्पादक हुनुहुन्छ । उहाँलाई फेसबुकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ ।
बाँकेमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी
प्रदेश २ मा फेरी थपिए ७६ कोरोना संक्रमित, धनुषामा मात्रै २९
कोरोनाबाट विश्वभर ३ लाख ५७ हजारको मृत्यु, ५७ लाख संक्रमित
गणतन्त्रमा पानी चल्दैन, जातीय कारणले चौरजहारी नरसंहार हुन्छ !
विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री राउतको माग
मूर्च्छित सपनाहरू ब्युँतन थाले : प्रधानमन्त्री
महोत्तरीका अनिललाई कतारमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइयो
मुसहरको देशप्रेम : पिलर नम्बर– ३०४ !
महोत्तरी : राहत बाँडेर १० बर्षीय बालकले मनाए जन्मदिन !
भोकालाई खाजापानी वितरण गर्न बर्दिबासका युवाहरु जुटे